Chọọchị Essene nke Kraịst - WRSP
Anne Kreps kwuru
SSLỌ ESSENE CHRIST OF TIMELINE
1898-1901: Pseudepigraphic Ozi nke Ndi-ozi iri na abụọ, nke kwuru na Jizọs bụ onye anaghị eri anụ, ka bipụtara nkebi na Lindsey na Lincolnshire Star akwụkwọ akụkọ.
1923: Mgbe m na-agụ akwụkwọ n’ọbá akwụkwọ Vatican. Edmund Bordeaux Szekeley kwuru na achọtala ọtụtụ ederede Hibru na Aramaic gosipụtara Jizọs bụ onye anaghị eri anụ, ma kwusaa nri anaghị eri anụ.
1958: David Owen mụrụ na San Diego, California.
1966: Nwa okorobịa David, onye dị afọ asatọ, hụrụ ngosipụta nke Meri Magdalin.
1960s: Malachi, onye isi Essene nke agbụrụ Lebanọn, si Mexico banye United States.
1965: David Owen, gbara afọ iri na asaa, were Malachi dị ka onye na-azụ anụ, wee mụta banyere anaghị eri anụ.
1970s: Malachi guzobere Ogige Udo nke Essene ebe ọwụwa anyanwụ San Diego.
1970s (mid): Day sonyeere Malakaị na ogige Essene wee nọrọ afọ asaa na-amụta site na onye nkuzi a.
N'afọ ndị 1970 (mbubreyo): A na-ere Ogige Malachi ka ụzọ maka ebe a na-adọba ụgbọala.
1976: Day gbara ajụjụ ọnụ Malakaị. Kaseti a na-ede n’ajụjụ ọnụ a bụ naanị ihe gosiri na Malakaị dị adị.
1997: Day bidoro Holy Qara na Jamaica iwebata ya Nsọ Megillah.
1998: Essene Church of Christ natara ọkwa enweghị ụtụ isi.
2011: Nna-ukwu kacha elu Ching Hai, onye ndu ime mmụọ nke bidoro ụlọ oriri na ọ veụ veụ vegan, na-ese ihe nkiri akụkụ atọ nke Essene Church of Christ.
2019: arkbọchị malitere na Qara nke abụọ, na-amalite na Ashland, Oregon
Esska Essene nke Kraist ekwuola na ndị sitere n'aka ndịozi bụ ndị Essene oge ochie, ịrọ òtù ndị Juu nke oge ochie na-ejikọkarị ya na Akwụkwọ Mpịakọta Osimiri Nwụrụ Anwụ. Ọ bụ Nwanna Day, nke amụrụ na 1958 dika David Owen, na-achịkwa ụka a ugbu a. [Foto dị n'aka nri] hasbọchị ekwuola na ọ na-enwe mmetụta mmụọ mgbe niile na Meri Magdalin, ọ na-abịakwutekwa ya na nrọ na ọhụụ mgbe ọ bụ nwata. N’ịbụ onye tolitere na San Diego, Nwanna Day kọwara dị ka “nwa nwoke na-efe efe,” ma na-ahapụkarị ụlọ akwụkwọ ịga osimiri. Ọ bụ n'ọnọdụ a ka ọ zutere onye nkuzi Essene ga-eduzi mgbanwe ime mmụọ ya.
Day zutere Malakaị mgbe ọ dị afọ iri na asaa na Malakaị bụ agadi nwoke nke afọ a na-amaghị. Malakaị nọ na-atụgharị uche n’akụkụ okporo ụzọ dị na Ndịda California. Daybọchị Nwanna nyere ya ụgbọ ịnyịnya Malachi gwara ya ka ọ tọgbọ ya n'ụlọ nri ndị anaghị eri anụ. Ọ jụrụ Malakaị ma nri anụ anaghị atọ ụtọ, Malaki zara ya, sị: “Ọ na-atọ ụtọ karịa ehi nwụrụ anwụ.” Na Day ịkọghachi nzuko ahụ, nkwupụta a gbanwere maka afọ iri na asaa ya, ebe ọ na-echetụbeghị na anụ ọhịa gburu anụ ọhịa tupu. Nwanna Day sonyeere Malakaị maka nri ahụ, o jukwara ya anya etu o si atọ ụtọ. Ọ ghọrọ nwa akwụkwọ Malakaị.
Malachi onye nkuzi Essene si Middle East zigara Malachi ka ọ zụọ otu onye na-eso ụzọ ya ka ọ chọta Chọọchị Essene nke oge a na America, naanị ebe n'ụwa, gwara ya, nnwere onwe okpukpe. Malakaị wuru otu mpaghara ma kụọ ụfọdụ ubi na mkpọmkpọ ebe nke ụlọ nkwari akụ gbapụrụ na San Diego. Na oge ngagharị nke ngagharị nke 1970s, ọtụtụ mmadụ bịara site na Malachi's Essene Garden of Peace wee nọrọ maka obere nleta. Bọchị nọrọ afọ asaa, na-ebili n'isi ụtụtụ na-arụ ọrụ n'ubi. Day siri ọnwụ na ọ ghọrọ onye nkuzi na-esote ụlọ ụka Essene n'ihi na ọ nọrọ ogologo oge iji bụrụ onye na-eso ụzọ Malakaị, ọ bụghị n'ihi ike pụrụ iche ọ bụla.
Enweghị ụzọ iji gosi ma ọ bụ gbaghaa akụkọ ntọala a. Malakaị na obodo ya anaghịzi adị. Onye nwe ụlọ nkwari akụ ahụ kwere ka o wuo ogige ahụ n'ihe onwunwe mebiri emebi, mana mgbe ọ nwụsịrị, ụmụ ụmụ ahụ mere ka ụlọ nkwari akụ ahụ bụrụ ebe a na-adọba ụgbọala. N'ihi ya, ọ dịghị foduru nke ubi. Malakaị agabigawokwa, na n'ihi na ọ banyere mba ahụ na-akwadoghị site na Mexico, enweghị ndekọ ọ bụla banyere ya. Na 1976, Day gbara Malachi ajụjụ ọnụ, ma debe ihe ndekọ na ihe omume ahụ. Casseti a bụ ihe fọdụrụ na Malakaị.
Isi ụlọ ụka ahụ, ogige Essene nke Udo, dị n'okporo ụzọ obodo dịdebere Greenleaf, Oregon. Chọọchị ahụ nwere ụlọ akwụkwọ ihe omimi a na-akpọ Essene Academy of Higher Learning. Esska Essene Church nke Christ emepebeghị ụlọ ụka nso nso a na Santa Cruz na San Francisco, California. Ofbọchị Greenleaf
Esska Essene nke Kraist wepụtara aha ya site na ịrọ òtù ndị Juu oge ochie akpọrọ Essenes. Ihe okwu a pụtara bụ ihe doro anya, mana otu eserese pụtara bụ Aramaic "assaya" (onye na-agwọ ọrịa) (Goranson 1984: 483-98). Chọọchị Essene nabatara ntụgharị asụsụ a. Nọgide na-enwe ahụ ike na ịgba ume gburugburu ebe obibi bụ ihe ndị bụ isi. Nri anaghị eri anụ bụ ihe achọrọ maka ndị otu, ụfọdụ ndị otu na-eri nri anụ anaghị eri anụ ma ọ bụ nke anaghị eri mkpụrụ. Ndi anaghị eri anụ na gburugburu ebe obibi na-agwa ndị otu echiche echiche apocalyptic sara mbara: ụka kwenyere na mmadụ bi na nke ọhụụ ọhụụ, nke anyị na-ekpe ọdachi gburugburu ebe obibi. Ọ bụ ọrụ nke Essene Church of Christ iji duzie ụmụ mmadụ site na mgbanwe a (Kreps 2018: 156-61).
Nzukọ nke Essene nke Kraist nwere ozizi iri na abụọ, nke dị na Akwụkwọ Essene Book of Doctrines, ma achikota ya na “Okpukpe di nso,” abu nke Nwanne Nwanne dere, nke dabere na akwukwo nso Essene, nkpughe nke Chineke, na ihe omumu nke onwe.
Chọọchị na-akụzi nkà mmụta okpukpe na-esonye na ihe omimi nke Hibru na echiche ọwụwa anyanwụ nke ịlọ ụwa. Ndi otu kwere na Chi nke “ABU M,” nke n’adighi nwoke ma obu nwanyi, onye kere “Elohim” nwoke na nwanyi. Site na nmekorita nwoke na nwanyi nke sitere na nwoke na chi puru ime ihe nile. Ihe nile e kere eke nwere chi, akụkụ nke chi na nwanyị. Chi ndia turu ime Jisos na Jisos Kraist na Shekhinah (Mo Nso), ndi bu nne na nna Chineke na umu nne nke nne na nna ndia muru. Na cosmos bụ ụlọ akwụkwọ maka mkpụrụ obi ndị na-akwagharị site na ọtụtụ eluigwe na ala mmụọ na-adabere na iwu nke ụgwọ karmic. Ndị ahụ na-agbaso ụzọ ahụ nke Essene Church of Christ setịpụrụ ka enwere ike ịkpọlite ​​n’ọnwụ dịka ndị mmụọ ozi ma biri n’eluigwe. Ahụ ndị mmụọ ozi a nwere ike ịlaghachi n'ụwa dị ka mkpa maka ọrụ maka ụmụ mmadụ.
Chọọchị ahụ na-achọpụta mmalite nke ya na akụkọ ihe mere eme nke Akwụkwọ Nsọ. Ọ na-ekwusi ike na mgbe ọdịda nke ihe a kpọrọ mmadụ, nke mere mgbe ụmụ mmadụ mbụ riri mkpụrụ si n'osisi Iden nke na-amị mkpụrụ-mkpụrụ, ndị nwoke na ụmụ nwanyị nwanyị Kraist guzobere okpukpe zoro ezo iji chekwa eziokwu ahụ n'ime ụwa na-abawanye njọ. Ndị Kraịst a guzobere Okpukpe Nasarean nke ụzọ Essene dị ka alaka ụwa nke otu ezinụlọ dị iche iche nke Kraịst, na-arụ ọrụ na mbara igwe. Chọọchị ahụ kwenyere na Onyenwe anyị na Nwanyị Kraịst guzobere nri ndị anaghị eri anụ Essene n'oge a. Esstù Essene rụrụ ọrụ n'okpuruala maka ọtụtụ akụkọ ihe mere eme mmadụ. Ọ bụ mmegharị zoro ezo, nke ga-apụta site n'oge ruo n'oge, naanị iji mebie ya n'ike. Chọọchị na-atụgharị ndị amaokwu Akwụkwọ Nsọ isi, dịka Noa, Abraham, na Joseph dịka ndị isi Essene.
Chọọchị ahụ chọtara, na Jizọs akụkọ ihe mere eme, ihe atụ nke ikuku mmiri na mmechi nke chọọchị Essene. N'ime akụkọ ha, Mary Magdalene na Jizọs tolitere dị ka Essene, mechaa lụọ di ma mụta nwa. [Foto dị n'aka nri] Meri na Jizọs kwusara ozi udo nke Essene nke na-enweghị ọmịiko ndị ọchịchị Rom na ndị Juu, ma mesịa mee ka a taa Jizọs ahụhụ ma gbuo ya. N'ịnabata esemokwu nke Baigent na Leigh's Mkpụrụ Nsọ, Grail Dị Nsọ, ECC kwenyere na Nwanyị Kraịst, na nwa ya, gbagara France mgbe akpọgidere ya n'obe. Nwatakịrị a ghọrọ onye ụkọchukwu mbụ nke Essene Order nke Blue Rose, iwu esoteric nke Meri na Jizọs hiwere n'abalị ahụ tupu ọ nwụọ. Iwu Essene nke Blue Rose ga-anọ n'okpuru ala ma bụrụ ọha mgbe oge ruru. Chọọchị Essene kwenyere na ụmụ mmadụ bizi n'oge oge mweghachi; ndị òtù bụ ngosipụta nke ọha nke ụka a zoro ezo.
Isi akwukwo nso nke Essene Church of Christ bu akwukwo nke onwe ha Nsọ Megillah: Akwụkwọ Nsọ Nasarean nke Enezọ Essene. [Foto dị n'aka nri] Chọọchị ahụ na-azọrọ na ihe odide ndị a bụbu nke akwụkwọ mpịakọta Hibru oge ochie. Malachi nyefere ndị mmadụ akwụkwọ mpịakọta ndị a ruo ụbọchị Nwanna Day gafere. A na-atụgharị ha na mpempe akwụkwọ mgbe akụkọ ihe mere eme mere ka ụka mee nke a. N'ihi ya, ọ bụ ezie na chọọchị ebipụtala ọtụtụ akwụkwọ mpịakọta na Bekee ha Nsọ Megillah, enwere ike ịpụta na enwere ike iwebata ederede ọhụụ ọhụụ na ụbọchị ọzọ. A haziri Akwụkwọ Nsọ ha na Akwụkwọ Nsọ. Na Megillah ekewa uzo abuo: agba ochie nke nwere akwukwo iri na ato, na Agba ohuru, otu Godspell. Ha na-ekwu na ọ bụ Jahleel, ada Mary Meri Magdalin, kuchiri. Ha na-ekesakwa traktị izi ihe abụọ, Akwụkwọ Essene Book of Doctrines, Na Okwu Mmalite nke Order nke Blue Rose. Enwere ike ịchọta ọtụtụ ozi na mpịakọta ndị a na weebụsaịtị ha (www.essene.org).
Ọ bụ ezie na ụka na-atụle ihe Nsọ Megillah ka ha bụrụ nkpughe nke Chineke dị ọcha, nke a na-agwagbughị agwagbu, ndị otu na-enyocha ọtụtụ ederede maka iwulite mmụọ. Ha na-atụle pseudepigraphic Ozi nke Ndi-ozi iri na abụọ, na nke Szekeley Oziọma nke Essene, nwere ikike ma na-emerụ emerụ. Ihe odide ndị a na-echekwa nkuzi ndị anaghị eri anụ nke Jizọs mana ha jụrụ nkà mmụta okpukpe nke chi nwanyị chi. Ha kwenyere na akụkụ nke amamihe Chineke pụrụ ịchọta nkewa n'akụkụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ dị iche iche site na Lotus Sutra na M Ching. Ha na-ajụ ihe odide nke Pọl onyeozi, ma na-akụzi na ọ bụ onyeozi ụgha nke mebiri ezi nkuzi nke Churchka.
"Holy Qara" bụ emume Nasarean Essene na-eweta Nsọ Megillah pụta mgbe e mebisịrị ya nwa oge. Ya na ndi otita abuo, onye nlekota nke akwukwo nso nke Essene si n’otu obodo rue obodo na eme nkwusa ma kesara ndi nwere mmasi. Day bidoro Qara Holy na 1997 rue Jamaica, na Qara Holy nke abuo na 2019, nke bidoro na Ashland, Oregon.
Ndị nwere ike ịgbanwe nwere ike iji akwụkwọ ozi zigara akwụkwọ Essene Bible (the Nsọ Megillah, na Akwụkwọ Essene Book of Doctrines, na Okwu Mmalite nke Order nke Blue Rose, Na Petals iri anọ na itoolu nke Blue Rose), usoro ọmụmụ mmeghe maka ịbanye na Essene Church of Christ. Site na izipu akwụkwọ maka ihe ọmụmụ a, mmadụ ga-ekwe nkwa na agaghị etinye ọdịnaya ọ bụla nke Nsọ Megillah na ntanetị maka nzube ọ bụla. Otu na-arụ ọrụ n'ime usoro ọmụmụ ụlọ ma na-ezigara ndị ụka ọrụ nyocha maka nyocha. Ozugbo emechara ọrụ ndị a, mmadụ tozuru oke ịbụ onye otu Essene Order nke Blue Rose.
Iji bụrụ onye otu na ezigbo nguzobe nke Essene Church of Christ, mmadụ ga-emerịrị ihe anọ achọrọ: zipu obere onyinye kwa ọnwa na chọọchị (onyinye bụ ụtụ isi); kwụa aha Esszọ Essene akwụkwọ akụkọ kwa afọ; na-eme ezi nwaamaala dịka edepụtara na "Iwu nke Zahyen" ha; ma debe nri onye anaghị eri anụ.
A na-eme ndị otu baptizim site na nmikpu mgbe ha batara na chọọchị ahụ, a na-enye ha mansras nke Essene ma ọ bụ Okwu Hibru nke Ike, n'ọtụtụ ọkwa nke ụzọ ime mmụọ ha. [Foto dị n'aka nri] Ndị na-eso ụzọ na-aga n'ihu n'ọkwa kachasị elu nke Order nke Blue Rose na-agafe baptism site n'ọkụ. A gbara ndị na-efe ofufe ume ka ha na-eme ụdị yoga ọ bụla, nke a na-ewere dị ka alaka nke Essene yoga, yoga mbụ ahụ Jizọs Kraịst kụziri. Ememe ndị ọzọ gụnyere ịmakụ osisi, ịgba egwu Sufi, ịtụgharị uche, na ịgụ abụ. Ndị otu na-ezere iji okwu Grik dị ka Jizọs na-akwado okwu Hebraicized (Yashua). (Kreps: 161-3)
Chọọchị Essene nke Kraist na-ewepụtakwa nzukọ ezumike kwa afọ na Breitenbush Hot Springs, ebe ezumike zuru oke na Oregon.
A na-ahazi ụlọ ụka Essene nke Kraịst dịka ọ dị na gburugburu esoteric. Chọọchị ahụ na-ewere onwe ya ngosipụta dị ugbu a nke okpukpe Nasarean nke ụzọ Essene, nke e guzobere n'Ogige Iden. Okpukpe Nasarean nke Essene Way nwere ogwe aka zoro ezo (Zeroah Nistar) na ogwe aka ekpughere (Zeroah Niglah). Ogwe Aka Zoro Ezo na-anọ n'okpuru ala, na-achịkwa akara akwụkwọ mpịakọta oge ochie ma họrọ nke ọhaneze na mgbe. Ogwe ndị ekpughere, dịka Essene Church of Christ, pụtara n'ọtụtụ ebe na akụkọ ihe mere eme mgbe ọ dị mma ịme ya.
Nzukọ nke Essene nke Kraịst bụ Onye-isi Nchọnchọ, Onye-isi Nchụ-aja. Ha na-ele onye ndu ha anya dịka ụgbọ mmadụ maka iweghachi ụka; a gaghị efe ya ofufe.
Iji ghọọ onye otu ụka Essene nke Kraist, mmadụ ga-agụrịrị otu akụkụ nke Nsọ Megillah, Book of Doctrines, na Okwu Mmalite nke Essene Church na Order nke Blue Rose. Iwu nke Zahyen, ngalaba nke ha Nsọ Megillah, na-akọwapụta usoro nhazi nke ụlọ akwụkwọ ihe omimi ha, Essene Mountain of Peace. E nwere ụzọ abụọ onye mbido ga-eso: Schozọ Ọmụma, nke gụnyere ịmụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ, yana Social Path, nke gụnyere omume mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Otu na-ebili ma daa na-eguzo n'ime obodo dabere na otu mmadụ si aga n'ihu n'okporo ụzọ ndị a.
Ọ bụrụ na onye nwere ike ịgbanwe anaghị achọ ị aụ iyi nke anaghị eri anụ, mmadụ nwere ike ịnwe njikọ na obodo site na isonye na Enyi nke Essene Church of Christ. Iji nweta ọtụtụ nkuzi nke ụka, mmadụ nwere ike mezue ọrụ ọzọ iji sonye na Order nke Blue Rose n'ime ụka Essene. E guzobere Order of the Blue Rose n’abalị bọtara ụbọchị Jizọs nwụrụ. Jizọs nyere Mary Magdalene Blue Rose, ihe nnọchianya nke iguzosi ike n'ihe, ọ guzobere iwu iji chebe ezi ozizi mgbe ụmụ nwoke na-eso ụzọ jụrụ onye ndu ya na nwa grail. [Foto dị n'aka nri] Ka mmadụ na-aga n'ihu na ọrụ ọmụmụ, onye na-aga n'ihu site na novice nke mbụ, na ọkwa nke abụọ, na ọkwa nke atọ. Site na imecha oru nile, mmadu ghari ibu Adept.
Abụọ esoteric okirikiri dị n'ime Order nke Blue Rose: The Order nke Red Rose, na Order nke White Rose. A na-akpọkwa Order nke Red Rose Ọdụm nke Zahyen na Ezinụlọ nke Holy Grail Family. Ọ bụ Josef nke Arimatia guzobere ya, na ntuzi aka nke Jizọs ichebe Meri mgbe ọ nwụsịrị. Ọdụm nke Zahyen bụ “ụsụụ udo na ịhụnanya” nke okpukpe; ha anaghị eji ngwa ọgụ nkịtị, ọ bụ ezie na ha na-amụ nka agha. A na-akpọkwa Order nke White Rose Nizere nke Wizards. Usoro a bụkwa nkewa dị elu n'etiti ọdụm nke Zahyen. Ha na-anọchite anya mmiri dị n'etiti Ogwe Zoro Ezo na Ngosiputa nke Okpukpe Nasarean nke ụzọ Essene.
Esslọ ụka Essene nke Kraist jụrụ nnukwu Iso Christianityzọ Kraịst dịka nrụrụ aka Pauline nke ezi okpukpe ahụ Jizọs kụziri. N'ịgụ Pọl, ọ jụrụ nri anaghị eri anụ, nwanyị nwanyị, ikike ụmụ nwanyị, ma nabata ịgba ohu (Kreps: 159).
Chọọchị na-akpachara anya ịhapụ onwe ya na mmegharị Essene ndị ọzọ. N'otu aka, ha ji akọ na uche n'eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ ndị na-ahụ ka ije ha enweghị isi. Okwu mmalite ka Nsọ Megillah na-ekwu, sị, “ịgbachi nkịtị anyị (iji gosi na ọ bụ ihe ederede ha dere) ga-eme ụfọdụ ịkwa emo. Kaosinadị, Mmụọ Nsọ agwala anyị na Ọ ga-egosipụta n'onwe ya izi ezi nke ihe odide a nye mkpụrụ obi ọ bụla nwere anya ọ ga-ahụ na ntị ịnụ. Ma ndị na-akwa emo na Baịbụl a enweghị nke ha. ” [Megillah: i]. N'aka nke ọzọ, ụka na-akpachara anya ịhapụ ndị otu Essene ndị ọzọ, ndị ha lere anya na ha hiere ụzọ. Na Akwụkwọ nke Ozizi na-ekweta mmegharị Essene ndị ọzọ dị, ma na-adọ aka na ntị na “ụfọdụ n'ime ndị otu a na ndị otu a bụ ndị amaala amaala na-achọ ịrụ ọrụ ọma. N'aka nke ọzọ, ụfọdụ na-eme ara ara ma na-akụzi ihe na-ezighi ezi n'aha ndị Essene. ”Akwụkwọ nke Ozizi[Foto dị na peeji nke 7]
Ọ bụ ezie na ọ na-ejide ebe nrụọrụ weebụ, chọọchị na-emegide teknụzụ. Churchka machibidoro na-akara n'akwụkwọ nke Nsọ Megillah n'ihi na ha kwenyere na na njedebe oge, a ga-eji kọmputa na ịntanetị mee ihe dị ka ụdị echiche uche na-achọghị ka akụkụ Akwụkwọ Nsọ ha mebie [Megillah: ii]. Akụkụ ụfọdụ nke Akwụkwọ Nsọ ha na-ebu amụma banyere ọganihu nke teknụzụ nke na-egosi ike ndị mmụọ ọjọọ na-arụ ọrụ: ịntanetị, kọmputa, IVF, na ọganihu sayensị ndị ọzọ bụ nkwenye nke ndụ Essene. [Iji kwanyere ọchịchọ ndị otu ahụ ùgwù, e nweghị ebe e dere akụkụ Akwụkwọ Nsọ ha ebe a.]
Foto # 1: Brotherbọchị Nwanna, Nnukwu Onye Nchụ aja nke Essene Church of Christ.
Image # 2: Mary Magdalene.
Foto # 3: Cover of Holy Megillah.
Foto # 4: Essene Baptism.
Foto # 5: Cover of Introduction to the Essene Church na Iwu nke Blue Rose.
** Ọ gwụla ma edepụtara ya, edepụtara ihe a na profaịlụ a sitere na Essene Church of Christ weebụsaịtị (www.essene.org) na ịgba ama nke ụbọchị Nwanna Day dị ka edere ya na akwụkwọ akụkọ Chọọchị Essene nke Kraịst na Iwu nke Blue Rose, dị na YouTube.
Baigent, Michael, Richard Leigh, na Henry Lincoln. 1982. Ọbara Dị Nsọ na Grail Dị Nsọ. London: Jonathan Cape.
Bọchị, Nwanna [Nazariah]. 1998. Akwụkwọ Nkuzi nke Essene Church of Christ. Elmira, Oregon: Chọọchị Essene nke Kraịst.
Bọchị, Nwanna [Nazariah]. nd Okwu Mmalite nke Essene Church of Christ na Order nke Blue Rose. Elmira, Oregon: Chọọchị Essene nke Kraịst.
Nzukọ nke Essene nke Kraist. Nsọ Megillah: Bible Nasarean nke ụzọ Essene. Elmira, Oregon: Chọọchị Essene nke Kraịst.
Nzukọ nke Essene nke Kraist. nd Akwụkwọ iri anọ na itoolu nke Blue Rose: Usoro ọmụmụ ihe omumu nke usoro nke Blue Rose yana Okwu Mmalite nke Mystery School nke a maara dịka Essene Mountain of Peace. Elmira, Oregon: Chọọchị Essene nke Kraịst.
Mkpokọta Essene. nd Nweta site na www.essene.org na 19 March 2020.
Goranson, Stephen. 1984. “Essenes: Etymology si 'sh, " RevQ 11: 483-98.
Kreps, Anne. 2018. "Na-agụ akụkọ ihe mere eme na Essenes nke Elmira." Ihe ochie: Mgbanwe nke oge ochie na oge ọhụụ na gafere, nke Dylan Burns na Almut Barbara Ranger dere, 149-174. Equinox, Sheffield. Edegharịrị na International Journal maka Ọmụmụ nke Okpukpe Ọhụrụ 9 (1): 5-31.
Szekely, Edmone B. 1977. Nchọpụta nke Essene Gospel of Peace. Otu International Biogenic Society.
Szekely, Edmone B. 1976. Oziọma nke ndị Essene: Akwụkwọ a na-amaghị ama nke ndị Essene, Akwụkwọ mpịakọta furu efu nke Essene Brotherhood. Essex, England: CW Daniel Co. Ltd.